Iivesi zeBhayibhile kumxholo: Ukuxhaphaza -> Umntu ongalunganga
Umntu ongalunganga: [Ukuxhaphaza]
1 Yohane २:९
Umntu othi usekukhanyeni, abe kodwa emthiyile uwabo, usesebumnyameni unangoku.
1 Yohane ३:१५
Nabani na ke omthiyileyo uwabo sisigwinta, ibe ke niyazi ukuba akukho sigwinta sinabo ubomi obungunaphakade.
Qinani nikhaliphe, ningaxhali, ningabi nayo nedyudyu. Kaloku uNdikhoyo uThixo wenu ungakuni; soze arhoxe okanye anilahle.”
Intetho ekrwada mayingaphumi emilonyeni yenu. Ukuthetha kwenu makuthambe, kube kokwakhayo, ukuze kube luncedo nentsikelelo kwabaphulaphuleyo.
Kuba kweli dabi lethu asilwi nabantu, kodwa silwa nemimoya ekhohlakeleyo esesibhakabhakeni, izilawuli, nabasemagunyeni, kunye nemimoya engcolileyo yeli phakade lobumnyama.
Ze ningaziphindezeli mntwini, okanye nimbambe isixhiba, koko nina mthandeni ummelwane wenu, kanye ngale ndlela nizithanda ngayo. Kutsho mna Ndikhoyo.
Obugubungelayo ubugwenxa uzicengezelela ukuthandwa, kodwa lowo umana ewunokoza umcimbi uchitha ubuhlobo.
Wakumgxotha umgxeki itsho iphele ingxabano, ngokunjalo zitsho zinqamke iingxwaba-ngxwaba nokunyelisa.
Noba angawa kangaphi na umntu olilungisa ubuya avuke; ke zona izikhohlakali zikhubeka zitshabalale.
Nokuba ndidavuza ezinkathazweni, wena uyandikhusela; ulwa nazo iintshaba zam, undihlangule ngamandla akho.
Nakuwe ke mntundini ugwebayo, nokuba ungubani, amatyholo aphelile. Ewe, ngokugweba omnye, uzigweba ngokwakho. Kaloku wena ugwebayo, wenza kwaezo zinto ugweba omnye ngazo.
 Yenzani unako-nako ukuhlalisana ngoxolo nabantu bonke. Zihlobo, musani ukuziphindezela ngokwenu. Impindezelo yiyekeleni ingqumbo kaThixo, njengoko *iziBhalo zitshoyo ukuthi: “Impindezelo yeyam, kuya kubuyekeza mna, itsho iNkosi.”
 Kaloku iziBhalo zikwatsho nokuthi: “Ukuba utshaba lwakho lulambile, luphe into etyiwayo; ukuba lunxaniwe, luphe into eselwayo; kuba ngokwenjenjalo ke, woba uluvisa udano, khon' ukuze luguquke.” Musa ukoyiswa bububi; boyise ububi ngokulungisa.
 “Ke mna ndithi kuni, nina nindivayo: Zithandeni iintshaba zenu, nibenzele okulungileyo abo banithiyileyo. Basikeleleni abo baniqalekisayo, nibathandazele abo banigxekayo.
 Ke mna ndithi kuni, zithandeni iintshaba zenu, nibathandazele abo banitshutshisayo, ize nibe ngabantwana boYihlo osezulwini, yena ovelisa ilanga phezu kwabakhohlakeleyo nabalungileyo, anise nemvula phezu kwabalungisayo nabangalungisiyo.
 “Ke bona abo bakusunduzayo baya kuhlaziswa; ewe, abakulwayo soze babe nto. Iintshaba zakho uya kuzifuna, kambe ke sobe uzifumane. Abalwa nawe bophel' emehlweni. Mna ndinguNdikhoyo, uThixo wakho; ndokugcina ndikomeleze, ndithi kuwe: ‘Sukuphaphazela, ndiza kukunceda.’
 “Nivile ukuba kwâthiwa: ‘Iliso maliphindezelwe ngeliso, nezinyo liphindezelwe ngezinyo.’ Ke mna ndithi kuni, musani ukuziphindezela kulowo unonayo. Othe wakuqhwaba kwisidlele sokunene, mguqulele nesinye. Nalowo ufuna ukukusa enkundleni, akuhluthe isambatho sangaphantsi, myekele nesokwaleka. Ukuba onegunya ukunyanzela ukuba uhambe ikhilomitha ibe nye, hamba neyesibini.
 Lowo unga angadla ubomi, abe nenkqubela, lowo unga angafumana imihla emnandi, makazilumle ekuthetheni kakubi, ayeke ukuthetha ubuxoki; makahlukane nobubi, enze okulungileyo; makaphuthume uxolo, ahlale kulo. Kaloku uNdikhoyo uwalusile amalungisa, uyayiva imithandazo yawo; kodwa ubafulathele abenzi bobubi, abaphanzise bangabi sakhunjulwa emhlabeni. Uyaweva amalungisa akuzibika kuye, awakhulule kuzo zonke iinzima zawo. UNdikhoyo ukufuphi nâbo badakumbileyo, ebaphakamisa abo baphelelwe lithemba.